Wararka Maanta: Sabti, May 11, 2013-Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Boostada Somaliland oo Shaacisay In ay iyadu Ogolaatay Lambarrada cusub ee Telesom
Agaasimaha Guud ee wasaaradda Boosaha iyo isgaadhsiinta Somaliland Mudane Xasan Cumar Hoorri, ayaa sharaxaad ka bixiyey fureyaasha cusub ee ay soo kordhisay shirkadda TELESOM.
“08-dii May 2013, shirkadda Isgaadhsiinta Telesom waxay lambaradeedii ku soo kordhisay Tirsiga 063 taas oo keentay in la isweydiiyo lambarka cusub inkastoo shirkaddu in muddo ah dadweynaha ku wacyigelinaysay isbedelkan soo kordhay”ayaalagu yidhi war-saxaafadeed uu ku saxeexan yahay agaaasimaha guud ee wasaaradda Isgaadhsiinta iyo boosaha Somaliland Xasan Cumar Hoori, waxaanu intaas ku daray. “Haddaba waxaa Wasaaradda xaq loogu leeyahay in ay bulshada u iftiimayso lambarkan soo kordhay iyo in ay dadweynaha ka wacyigeliso wax kastoo la xidhiidha isgaadhsiinta dalka. Sida aan ka warqabno, Ururka Caalamiga ee GSM waxaa uu lamabar 06 u qondeeyay telifoonada mobilka ee Somaaliland iyo Soomaaliya. Shirkadda Hormuud ee Badhtamaha iyo Koonfurta Soomaaliya waxaa ay saami u heshay lambarka 061. Shirkadda Gollis ee maamulka Punland iyaduna waxaa ay qaadatay lambarka 062 halka shirkadaha Somaliland iyaguna ay kala qaateen Telesom 063, Telecom 065, iyo Nationlink 067 iyo 068.
Illaa hadda dalkennna waxaa laga isticmaala furaha dal (country Code) 252 kaas oo aan la wadaagno Soomaaliya. Hase ahaatee, waxaa innoo kala soocan furayaasha degaamada. Sidaa darteed, waxaannu halka ku qeexaynaa lambarka cusub ee 063 inuu gaar u yahay dalkeenna iyo Shirkadda Telesom ee Somaliland. Lambarku ma aha mid aan la wadaagno Xamar kamana duwanaa qorshayaashii hore ee lagu maamuli jiray lambarada dalka.
Haddaba iyadoo isla arrinkan ay hore warbaahinta uga la hadleen wasiirka iyo madaxda wasaaradda, mar labaad waxaan halka ka caddeynaynaa in wasaaraddu oggolaatay adeegsiga lambarada cusub ee 063, isla markaana aanu waxba u dhimmayn Qarannimada Somaliland, taasoo dhammaanteen aanu wada taagan nahay difaaceeda iyo horumarinteeda.
Isagoo hadalka sii wata ayuu yiri: “Wasaaraddu waxay hore ugu baaqday in shirkadaha isgaadhsiintu shir muhiim ah isugu yimadaan Xafiiska Agaasimaha Guud, 10.00 subaxnimo, maalinta Arbacada, 15ka May si looga wada hadlo qorshaynta lambarada qaran iyo wax kasta ka hor in laga wada hawl galo sida ugu dhow ee dalku ku heli karo Fure Dal oo gaar u ah Somaaliland. Waxaannu ku rajo weyn nahay in xukuumadda, shirkadaha isgaadhsiinta, ganacsatada iyo aqoonyahanku gacan naga siin doonaan sidii loo xaqiijin lahaa arrinkaa oo leh mudnaanta kowaad ee dalka. Allaa Mahad Leh.”